Nitokona ny mpianatr’i Barikadimy : nirefodrefotra ny lakrimozenan’ny Emmo/Reg | NewsMada
Nitokona ny mpianatr’i Barikadimy : nirefodrefotra ny lakrimozenan’ny Emmo/Reg
Par Taratra sur 29/09/2017
Nirefodrefotra indray ny baomba mandatsa-dranomaso tao amin’ny faritry ny oniversiten’ i Barikadimy Toamasina, omaly maraina. Tsy nisy ny voasambotra tamin’izany…
Nitokona ny mpianatra, ireto farany izay nandrehitra kodiarana teo amin’ny lalam-pirenena faharoa hisakanana ny lalan’ny mpitandro filaminana tsy ho tafiditra ao amin’ny faritry ny oniversite. Noho ireo mpianatra tsy nijanona tao amin’ny tokontaniny nanao ny fitokonana fa nivoaka ivelany ka nandoro kodiarana. Tsy nisalasala ny nandrefodrefotra ny baomba mandatsa-dranomaso ary niditra avy hatrany ny faritry ny oniversite ireo Emmo/Reg.
Tsy nisy fisamborana mpianatra tamin’ ity fitokonana ity fa kosa nohezahin’ny mpitandro filaminana ny nandravana ny hetsika ary niverenan’ ireo mpitokona tao amin’ny fefin’ny oniversite. Raha ny loharanom-baovao, fitakiana vatsim-pianarana sy tokony hizarana amin’
izay ilay trano misy rihana telo vaovao ao an-toerana ny fototry ny fitokonana. Hatramin’ny omaly aloha, tsy nisy vokany io hetsika io, izay ahina ny mety mbola hitohizany.
Tranga matetika miitatra amin’ny oniversite manerana ny Nosy ny hetsika toy izao. Miainga amin’ny oniversite iray ary manao koa ny hafa. Noho ny olana itovizan’ireo oniversite rehetra no anton’izany. Olana eo amin’ny vatsim-pianarana, ny tranon’ny mpianatra. Tsy manana vahaolana maharitra ny minisitera mpiahy azy ireo. Vahaolana vonjy tavanandro hatrany. Amin’ny ankapobeny, zavatra toy izany hatrany ny miseho eto amintsika amin’ny toe-javatra maro. Zary gaboraraka…